Ebee ka snot si?
N'ụzọ dị mwute, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-adịkarị jụụ, ma na-arịa ọrịa a ọtụtụ ugboro n'afọ. Ọtụtụ mgbe, otu akụkụ nke oyi ọ bụla bụ snot, nke na-enye anyị nnukwu nsogbu na nchekasị.
"Ebee ka snot si bịa, ebeekwa ka oyi si abịa?" - ajụjụ ndị a na-amasị ọtụtụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị dọkịta emepụtawo ọtụtụ ihe kpatara ọdịdị nke snot na oyi.
Kedu ihe bụ snot?
Ọhụụ (ndị ọkà mmụta sayensị - "nchịkọta ntụrụndụ") na-emepụta n'ime oghere ntụrụndụ nke mmadụ. Ndị mmadụ na-arụ ọrụ dị mkpa n'anụ ahụ. Ọrụ ha bụ ichebe akụkụ iku ume anyị. Usoro iku ume nke mmadụ na-emepụta ihe iji chekwaa akpa ume site na mmiri na-ekpo ọkụ.
Akwukwo ahu bu mmiri, nnu na protein mucin, nke oke snot bu. Ọ bụ imi na-enye aka na-echebe anyị pụọ na nje bacteria na nje virus dị ize ndụ.
N'ụbọchị ahụ, akpụkpọ anụ mucous nke oghere ntụrụndụ nke mmadụ nwere ike ịmịpụta site na 10 ruo 100 ml nke imi.
Ihe na-akpata imi na snot
Isi ihe kpatara ọdịdị snot bụ hypmiamia. Otu nje na-emekarị ka ọ na-awakpo mmadụ n'oge ihu igwe oyi. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara eziokwu a, site na-eduzi nnyocha na nyocha na nnukwu ìgwè mmadụ.
Ihe ọzọ kpatara ọdịdị nke snot bụ mmeghachi omume nfụkasị. N'okpuru mmetụta nke ihe ndị na-eri ahụ, mucosa na-emepụta ndị na-edozi ahụ, bụ nke na-eme ka nchekwa nchekwa dị elu. N'okpuru mmetụta nke mmiri, protein nke mucin nwere ike ịba ụba nke ukwuu, ya mere snot na-abawanye.
N'otu aka ahụ, ọnụ ọgụgụ nke snot na oyi na-amụba. N'okwu a, nnukwu mmepụta nke ndị na-edozi dị mkpa iji merie nje. A na-emepụta mgbatị nasal na mgbe ọ na-arụzu ọrụ ya, na-esote. Eziokwu a bụ azịza nke ajụjụ mere snot ji aga.
Gini mere oji ji agba ndu?
Site na agba nke imi aka ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ụdị na ọrịa nke mmadụ. Soply nwere ike ịbụ uzo, odo, aja aja na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Agba agba ndụ nke snot na-egosi na ọrịa ahụ amalitela. Ọtụtụ mgbe, ndị na-acha akwụkwọ ndụ na-egosi bronchitis ma ọ bụ na oyi baa. Mgbe ahụ mmadụ na-ebute virus, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-emepụta ihe pụrụ iche iji merie oria ahụ. Ọ bụ ihe ndị a na-enye mmịnye aka na agba aja aja.
Ọdịdị nke snot na-egosi na ahụ na-alụ ọgụ ahụ. Iji lụ ọgụ n'ụzọ dị irè, ị kwesiri ịdị na-ekpo ọkụ ma na-erekwa ndụ. Ọzọkwa, ahụike na-adịghị ike n'oge a chọrọ nri zuru oke, nri vitamin.
Ntak emi ọfụm odo?
A na-ahụkarị ndị na-ese siga na agba aja aja. Site na ingestion n'ime usoro iku ume, nicotine na-edozi na mucosa ma na-ekpuchi ya na agba odo.
Ọ bụrụ na odo snot pụtara na onye na-eseghị ụta, mgbe ahụ, ha nwere ike ịpụta ọbịbịa nke ọrịa siri ike na ahụ, ikekwe ọbụna ọrịa kansa. N'okwu a, ọ dị mkpa gbalịsie ike ịgwa onye na-agwọ ọrịa ahụ maọbụ oge.
Kedu esi gwọọ snot?
Ugbu a na ị maara ihe mere snot ji apụta, ị nwere ike iwepu nsogbu a ngwa ngwa site n'ịgbaso ndụmọdụ ole na ole:
iji belata mmepụta nke snot, ị kwesịrị ịṅụ ọgwụ ndị pụrụ iche - ndị na-eri nri, ndị na-egbochi ọrịa ọgwụ na ọgwụ.
na-eme ka mmiri dị ọcha n'ime ụlọ. Igwe ikuku na-akwalite snit na imi na-agba ọsọ;
mgbe niile vysmarkivatsya.
Ọ dị mfe iji gbochie ọdịdị nke snot na oyi, na-edebe iwu nke ido onwe onye ọcha na ndụ dị mma. Ọ bụrụ na ị na-ekpuchi okpu na oge oyi ma ghara imebiga ya ókè, mgbe ahụ ọ dịghị oyi ga-enwe ike imeri gị.
Mgbu na azụ n'elu ala ala
Ceftriaxone - egosi maka ojiji
Paracetamol si na okpomọkụ
Neurodermatitis - akpata
Ude si na Juda
Aralbin Ointment - usoro na usoro pụrụ iche nke ngwa
Lower azụ mgbu
Ngwá ọgwụ nje ndị na-eme ihe na-egbu egbu
Ike nke usoro ụjọ
Ptosis nke nkuanya elu - na-akpata ma na-agwọ usoro nile nke pathology
Usoro ọgwụgwọ nke ọkpụkpụ azụ
Onye na-ere ahịa kachasị mma nke Jamine Olivera ga-akụziri gị otu esi eji ngwa ngwa kwadebe nri ahụike
Chrissie Tayen emeela ndokwa maka oge a mụrụ nwa ya
Millet porridge na anụ
Azụ Chacot - contraindications
Cutlets si azu kaapu na nku - uzommeputa
Ekpere maka enyemaka
Ude si urticaria
Daniel Radcliffe kọwara otú o si lụọ mmanya
Otu iko maka aka pensụl
Ụlọ osisi Citrus
Ulo elu ụlọ
Akpaka Akpa 2013
19 ndụmọdụ bara uru banyere otu esi eme ka ụgbọ ala dịkwuo mfe karị
Mkpụrụ ndụ nke ihe ọmụmụ na ụmụ amụrụ ọhụrụ
Chi nwanyị Diana na akụkọ ifo Greek na Roman
California na-apụta - uzommeputa
Umu osikacha n'ulo
Kedu ụdị okooko osisi n'ime ụlọ nwere ike itinye n'ime ime ụlọ?